नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार १७:१६
HT २०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार १७:१६
काठमाडौं । बङ्गालको खाडी आसपास विकसित भएको न्यून चापीय क्षेत्रका कारण शुक्रबारदेखि नेपालको पूर्वी भूभाग प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशमा मनसुन आगमन भएको छ ।
महाशाखाले मनसुनलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र सबैलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिन समेत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा सामान्यतया मनसुन जुन १३ मा भित्रिने र अक्टोबर २ मा बाहिरिने गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली जलवायु दुष्टिकोण मञ्च (एसएएससिओएफ)ले आगामी मनसुन अवधिमा नेपालका धेरैजसो भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरेको छ ।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको र धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । प्रदेश नं २, वाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः हामीलाई मुटुरोग, क्यान्सर रोगजस्ता विषयमा कति विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिएको हो ?
Spread the loveकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा क्षेत्रका कुन कुन विधामा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा गरेर शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको सातौं बैठकलाई शुक्रबार अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘हामीलाई मुटुरोग, क्यान्सर रोगजस्ता विषयमा कति विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिएको हो ? […]
२०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार १०:२६
२०७८ बैशाख १७, शुक्रबार २०:५१
सगरमाथा आरोहणका लागि ४३ आरोही समूहलाई अनुमति
२०७८ बैशाख १२, आईतवार २१:४५